> Resource > bedelan karo > Top 5 MoboRobo Alternative
Wixii kuwa raadinayaa kale MoboRobo ah ee Android, hadalkay wuxuu idin siin doonaa xisaab of 5 software maamulka Android ay og in aad ku xoojiya sidii ay si fudud u maareeyaan aad casriga Android.
4. Android Taliyaha
MyphoneExplorer ayaa u qoondeeyey mid ka mid ah qalabka ugu fiican freeware ee telefoonada Sony Ericson. Sahamisa ayaa sidoo kale taageertaa telefoonada Android via xira dhex cable USB, Blue ilkaha iyo Wi-Fi.
Feature Cinwaanka Kitaabka la hagaagsan toos ah la Gmail, Outlook, Thunderbird, SeaMonkey, Tobit Daa'uud iyo IBM Notes.
U ogolow archive, dhoofinta iyo soo dejinta ee SMS.
In loo sahlo in uu abaabulo view taariikheed iyo awood u hagaagsan si toos ah Sunbird, Google, Thunderbird, Outlook, Windows Vista Calendar, Tobit Daa'uud iyo IBM Notes.
Its file browser qoreysa nidaamka khasnado lagu dhimayo wareejinta xogta iyo syncing si toos ah sawirrada.
Waxay leeyihiin qaar ka mid ah arrimaha markii lala isticmaalo Galaxy S4 on Windows XP.
Ku dar badan oo ah alaabtii dheeri ah sida popups iyo furin toolbar.
Software labaad in aan leenahay in MoboRobo liiska kale waa AirDroid oo u suurta galinaya in aad maamusho qalab Android aad via browser web ah. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah faa'iidooyinka ama qasaarooyinka aadka is-dhexgal software.
Dhaqaaji videos, ringtones, sawiro, Cajalado iyo faylasha kale oo badan oo ka qalab Android aad oo aan haysan si surin-in cable USB ah.
Hel oo soo diro SMS iyada oo adeeg shebekad aad ka your computer.
Tani waxay awood kuu siinayaa in ay si fudud oo dhakhso ah makiinada ee SMS. Sidoo kale waxa aad maamuli kartaa threads iyo abuuro gurmad ah u yeeshaa.
U ogolow in aad meel fog laga helo telefoonka smart aad Android ay dhacdo in uu lumo ama la xado.
Waxay qaadataa sawirka qofka in isku dayo inuu furo telefoonka. Waxa kale oo uu fududeeyaa maamulka app fudud.
Ma u baahan tahay si loo soo dajiyo Quick Time marka aad rabto in aad daawato videos aan duuban.
Lyadoo loo sii liiska xal kale MoboRobo, software saddexaad in aan leenahay waa Kies Samsung . Codsigan waa software dhamaystiran Android oo qoreysa tiro balaadhan oo ah fursadaha u saamaxaya in aad maamusho qalab Samsung. Connect qalab aad la Samsung Kies iyo shuban aad sawiro qaali galay software this ay rahmaad ah iyo.
Si fudud loo abuuro oo la maareeyo playlists, oo iyaga ku biiro iyo ka PC.
Aad Ogeysiin updates wax software in ay diyaar u yihiin qalab Android aad.
Xoogaa A gaabis ah oo u muuqdaan si ay u helaan cid waqtiyo.
Mararka qaar waxaa ku kaliftay in inta ay socoto gurmad ah.
Kale MoboRobo afraad inaad marwalba isku dayi kartaa waa Taliyaha Android . Waxay ka caawisaa si ay u maareeyaan files iyo barnaamijyadooda ku rujin qalab aad Android la taliyaha lahayn.
Ka kooban qaybaha isku dhafan oo dhowr ah kuwaas oo laga been u dhinacyo sawir weyn sida file sahaminta, macluumaad qalab, maamulka codsiga, awoodaha biligleynaya, islana app saxiixa.
Hayso interface user aad falgal garaafyada in awood aad si fudud u baadhaan oo dhan content in aad leedahay qalabka Android aad.
Copy iyo paste fayl badan iyo files, iyo asturnaanta files edit, iwm
Fududeynta rakibo ee Dalka Chine.
Ma aha qalab standalone iyo geedi socodka ka heli hakin markii qaar ka mid ah.
Wondershare MobileGo for Android waxaa aad u fududeynta, is-dhexgal iyo duwan oo dhamaystiran si MoboRobo. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad maamuli dhammaan faylasha ku qalab Android adiga oo aan ka kaaftoomi kasta
Dib dhammaan xogta ku saabsan qalab Android iyo ku haystaa oo la click fudud.
Download, uninstall, rakibi barnaamijyadooda fudud iyo barnaamijyadooda ka phone dhaqaaqo card SD ah.
Miyuu audio iyo video Converter ah hidi.
Xiriirada Transfer iyo ka Outlook.
La jaan qaada 2000 oo lagu daray Android Qalabka telefoonada gacanta.
Taageerada oo fariin u diraya hal dad badan oo ka computer ka waqti.
Ma taageeri updates ee Chine oo ku saabsan qalab Android aad.
Dadka isticmaala Mac, waxaad isticmaali kartaa version Mac - Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac)
Best LG PC Suite Alternative in Maamul LG Phones